साइकलयात्रीलाई बचाउन खोज्दा माइक्रोबस पल्टियो, आधादर्जन यात्रु घाइते
राजविराज, साउन ४ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको पोर्ताहामा सोमबार साँझ माइक्रोबस पल्टिँदा आधा दर्जनभन्दा बढी यात्रु घाइते भएका छन् ।
राजधानीमा यो वर्ष पनि हैजा
काठमाडौं, साउन ४ । राजधानीमा यो वर्ष पनि हैजा देखिएको छ । ललितपुरमा ६ र काठमाडौंमा ३ स्थानमा हैजा देखिएको हो ।
त्रिभुवन विमानस्थलमा सेनाको निगरानी
काठमाडौं, साउन ४ । विश्वका कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रसमेत आतंकवादी आक्रमणको निसानामा परेपछि नेपाल प्रवेश गर्ने मुख्य नाकामा नेपाली सेनाको ‘एन्टी टेरोरिस्ट युनिट’ ले निगरानी थालेको छ ।
डा. केसीको माग सम्बोधन र जीवनरक्षा गर्न संसदीय समितिको निर्देशन
काठमाडौं, साउन ३ । व्यवस्थापिका–संसद सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न र उनको जीवनरक्षा गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । अनशनरत् डा. केसीको स्वास्थ्यस्थिति नाजुक बन्दै गएको भन्दै समितिले तत्काल उनले अहिले उठान गरेको चारबुँदे माग सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
घर भत्किँदा दम्पती पुरिए
पाल्पा, साउन ३ । अविरल वर्षाका कारण रामपुर गेझा मगरेमा घर भत्किँदा एक दम्पती पुरिएका छन् । रामपुर नगरपालिका–१४ मगरे बस्ने ४८ वर्षीयका अमबहादुर गाहा र उनका श्रीमती ५० वर्षीया सुमित्रा गाहा घर भत्किँदा पुरिएका हुन् ।
झुन्डिएको अवस्थामा बृद्धाको शव फेला
महोत्तरी, साउन ३ । महोत्तरी जिल्लाको अतिविकट खयरमारा गाविसमा सोमबार बिहान झुन्डिएको अवस्थामा एक बृद्धाको शव फेलापरेको छ । खयरमारा गाविस–८ बस्ने ७० वर्षीया लालमाया स्यांगतानको शव उनको आफ्नै घरको बार्दलीमा झुन्डिएको अवस्थामा फेलापरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीले जनाएको छ ।
महोत्तरीको आधादर्जन नदीमा बाढी आयो
महोत्तरी, साउन ३ । शनिबार रातिदेखि आइतबार साँझसम्म अविरल मुसलेधार पानी परेपछि महोत्तरी जिल्लाको आधा दर्जनभन्दा बढी नदीमा बाढी आएको छ । लगातारको भीषण वर्षासँगै जिल्लाको रातु, विग्ही, जंघा, अंकुशी, भब्सी, गेरुकी र मरहा नदीमा बाढी आएको स्थानीयले बताएका छन् ।
बाढीले उल्र्लीखोला बजारका ५९ घर जोखिममा
गुल्मी, साउन ३ । तीन दिनदेखिको निरन्तर बर्षाले बडिघाट खोला बढेपछि गुल्मीको जोहाङ गाविस–२ मा रहेको उल्र्लीखोला बजारका ५९ घर जोखिममा परेका छन् ।
साउने सोमबारमा ब्रत बसेर के माग गर्छन महिलाहरु ?(भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं, साउन ३ । आज साउने सोमबारको पहिलो दिन । हिन्दू नारी आजका दिन ब्रत बसी शिवजीको पूजा आराधना गर्दछन् ।
दुई मोटरसाइकल ठोक्किदा चारजना घाइते
गौर, साउन ३ । रौतहटको चन्द्रपुर–१४ डुमरिया पेट्रोल पम्प अगाडि सोमबार दुईवटा मोटरसाइकल आपसमा ठोकिदाँ ४ जना घाइते भएका छन् ।
काठमाडौं, साउन ३ । स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न माग राखी सुरु भएको डा. गोविन्द केसीको अनशनप्रति मधेसी चिकित्सक सङ्घले असहमति जनाएको छ ।